Koranam-pianakaviana nanamarihan'i Haingotiana ny faha-50 taonany. | Malagasy eto Italia
Koranam-pianakaviana nanamarihan'i Haingotiana ny faha-50 taonany.
Nampidirin'i superadmin ny Mon, 27/11/2017 - 21:57
Nahafinaritra tokoa ny takariva tany Sorrento, nanasan'i Haingotiana malagasy vitsivitsy, niara-nankalaza taminy ny faha-50 taonany. Vitsivitsy ihany tokoa satria tsy mora ny mikarakara izany na dia satriny aza ny hanasa ny rehetra.
Takariva niavaka ilay izy satria nentiny nampisehoana tamin'ireo havana sy namana tompon-tany izany hoe kalon'ny fahiny malagasy izany, ankoatra ny totorebika izay efa manomboka ahalalan'izy ireo antsika. Naredona erý ireo hira tsy tontan'ny ela efa zary tsy mba afaka am-bavantsika, nahafinaritra ny nahita ny lamba landy nisalorana sy nisampinan'izy maro mianadahy notarihin'i Ramose Jojo, mpampianatra mozika , nahavolivoly ny feon'i Richard narahan'i Rindra teo amin'ny vata maroafitsoka raha nanao hiran'i Ossy izy ireo. Samy mpianatra ho matihanina amin'ny mozika eny amin'ny Conservatoires izy mirahalahy, i Richard Rasolonjatovo eto Roma ary i Rindra Ramarosandratana any Paris.
Tonga soa tatý Roma izahay ny alahady tolakandro na nangina aza ny antsasa-dàlana fa niesona daholo ny mpandeha .
Mbola manerinerina daholo tonga soa an-tokantrano avy, reraka kanefa feno fifaliana tokoa.
Tsy hay ny tsy hankasitraka an'i Haingo ary averinay etoana ny firariantsoa ho azy ho amin'ny 50 taona manaraka : fifaliana, fahasalamana ary soa sesehena. Dia afaha havizanana amin'izay fa dia afa-po izahay nasaina e !
Affettuosissimi auguri : i primi 50 anni eranno "Successo", i prossimi 50 saranno "Trionfo" !